'कोइराला' परिवारको राजनीतिक विरासत जोगाउने अभियानमा नेतात्रय | Citizen Post News
'कोइराला' परिवारको राजनीतिक विरासत जोगाउने अभियानमा नेतात्रय
२०७५ असोज ११ गते ०७:१८
काठमाडौं । नोना कोइराला र गिरीजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएपछि पारिवारिक सम्पत्तिमा कोइराला परिवारले कित्ताकाट गर्यो । यतिखेर, विभाजित कोइराला परिवार नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पारिवारिक विरासत जोगाउन भने एकै ठाउँमा उभिएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा कोइराला परिवारले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी समेत गरेको छ । त्यसको खुलासा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गरेका हुन् । पछिल्ला दिनमा कोइराला परिवार कांग्रेसभित्र आफ्नो पारिवारिक विरासतलाई कसरी जोगाउने ? भन्ने चिन्तनमा छ ।
त्यसका लागि डा. शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । कोइराला परिवारको विरासत थामेका सुशील कोइरालाको निधनपछि तत्कालिन संस्थापनको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेता पौडेल पनि सती जान थालेको ठहर गर्दै कोइराला परिवार यतिखेर आन्तरिक राजनीतिमा एकजुट भएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रभाव राख्न सक्ने नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायत सक्रिय भएका छन् । अर्कोतिर, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौंलाले युवा जमातलाई बोकेका छन् । नेता सिटौंला स्व. नेता गिरीजाप्रसादका प्रिय पात्र थिए । त्यसैले पनि गिरिजाप्रसादले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन विशेष भूमिका खेलेका सिटौंलालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । कोइराला परिवारका उत्तराधिकारीका रुपमा सिटौंला अघि बढ्दै गए भने नेतृ सुजातासँग उनको पानी बाराबारको सम्वन्धका कारण कोइराला परिवार रुष्ट बन्दै गयो ।
पछि सुशील कोइरालाले पनि सिटौंलालाई नै बोकेको आरोप लगायो । त्यसैक्रममा शुशीलले सिटौंलालाई नै महामन्त्रीमा मनोनित गरे । त्यहि बेलादेखि कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा सिटौंलाले आफ्नो गुट बनाउन सफल भए । अहिले देउवाको उदयसँगै छायाँमा परेको कोइराला परिवार विधानमा व्यापक संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । केही समय सभापति देउवासँगै अलमलिएका शशांकले अब परिवारको विरासत नफर्किएसम्म कांग्रेस उभोँ नलाग्ने बताइसकेका छन् ।
सभापति देउवा शक्तिशाली बन्ने होडमा कांग्रेसका कतिपय रणनीतिक काममा असफल भए । उनकै कारण काँग्रेस नेताहरु फरक गुटमा विभक्त भएका देखिए । सरकारको विरोधमा काँग्रेसले साझा धारणा बनाउन सके पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देउवाविरुद्धका अनेक विभक्त समूहहरू सक्रिय छन् । जसका कारण काँग्रेस उभोँ लाग्नुको सट्टा उधो लागिरहेको छ ।